अस्ट्रेलियाः अग्नि नियन्त्रकहरुले २० करोड वर्षदेखिकाे पुरानो झण्डै २ सय रुख कसरी बचाए ? «
अस्ट्रेलियाः अग्नि नियन्त्रकहरुले २० करोड वर्षदेखिकाे पुरानो झण्डै २ सय रुख कसरी बचाए ?
Published : 18 January, 2020 8:15 pm
काठमाण्डौ – अस्ट्रेलियामा आगलागीका कारण ठूलो क्षति हुँदा एउटा राम्रो समाचार पनि प्राप्त भएको छ । आगलागीका कारण ५० लाख एकड क्षेत्रमा फैलिएको जङ्गल नष्ट भइसकेको छ । तर अग्नि नियन्त्रकहरु झण्डै दुई सय वटा प्राचीन र महत्वपूर्ण रुख बचाउन सफल भएका छन् ।
वोलेमी पाइन प्रजातिको यी रुखलाई स्थानीयले ‘डाइनाेसर ट्रीज’ को नाम पनि दिएका छन् । यी रुखहरु २० करोड वर्षदेखिकाे पुरानो भएको मानिएको छ । जङ्गल आसपासको आगो निभाएपछि अग्नि नियन्त्रकहरु हेलिकोप्टरमार्फत जङ्गलको बीच यी रुख रहेको ठाउँसम्म पुग्न सफल भए ।
न्यु साउथ वेल्सका पर्यावरण मन्त्री म्याट केनका अनुसार वोलेमी पाइन्स रुख विश्वमा केवल ब्लु माउन्टेन्सको जङ्गली इलाकामा मात्र पाइन्छ । यस्ता मात्र दुई सय वटा रुख बचेका छन् । तर यी रुख रहेको वास्तविक क्षेत्र गोप्य राखिएको छ ।
कसरी बचाइयो ती रुख ?
आगलागी हुने बित्तिकै ती रुख बचाउनको लागि एक अपरेशन सुरु गरिएको केनले बताए । आगो ती रुखतर्फ बढिरहेको थियो । अग्नि नियन्त्रकहरुले पहिला ‘वाटर बम्बिङ्ग जेट’ को सहायताद्वारा ती रुख वरिपरि पानी र आगो निभाउने फोम छर्किए । आगो कम भइसकेपछि उनीहरु जङ्गलभित्र छिरे । डाइनाेसर ट्रीज ननिक जेनेरेटरबाट चल्ने एक सिँचाइ प्रणाली लगाए, जसका कारण रुखमा आगाेकाे प्रभाव कम पराेस् ।
२६ वर्षअघि ती रुखहरु अझै पनि अस्तित्वमा छन् भन्ने कुरा थाहा भएको केनले बताए । त्यसअघि यी रुख लोप भइसकेको बताइन्थ्यो ।
कोरोनाको नयाँ प्रकार विश्वभर फैलँदै
केही साता अगाडि बेलायतमा देखा परेको कोरोनाको नयाँ प्रकार (भेरियन्ट) विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि तीव्ररुपमा
बुवा थुनामा, आमाले छोडिन्–जाडोमा कुकुर च्यापेर सडकमा सुत्न बाध्य बालक
भारतको मुजफ्फरनगरमा एक सानोे बालक फूटपाथमा कुकुर च्यापेर सुतेको कारुणिक तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको
चीनको वुहानमा कोरोनाबाट निको भएका ९० प्रतिशतको फोक्सो ड्यामेज
चीनको वुहानमा कोरोना सं’क्रमण भएर निको भएका ९० प्रतिशत मानिसको फोक्सो अझैं निको नभएको सार्वजनिक
अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण रोजगार गुमाउनेमध्ये ६० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी रहेको एक अध्ययनले